Nepal Samaya | ओलीको विकल्प खोज्न जरुरी छ, म कुनै हालतमा 'ब्याक' हुन्‍न : भीम रावल [अन्तर्वार्ता]
धीरज बस्नेत | काठमाडौं, बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
१०औँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको ठूलो पंक्तिलाई उपाध्यक्ष भीम रावलले चुनौती दिएका छन्। मंसिर १० बाट हुने तय भएको एमाले महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ५ दिनअघि मात्रै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावल १० बुँदे सहमतिपछि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ छोडेर एमालेमा नै रहिरहेका नेता हुन्।
१० बुँदेलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने नेताहरूसमेत ओली कित्तामा पुगेका बेला रावलले भने ओलीलाई चुनौती हुने गरी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुलाई ओलीपक्षका केही नेताहरूले भने 'बार्गेनिङ टुल' मात्र भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको सम्भावना, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा ओलीलगायतका नेताको एकलौटीपन, महाधिवेशनका प्रतिबद्धतालगायतका विषयमा नेपाल समयका धीरज बस्नेतले भीम रावलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तयारी कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ?
मैले हाम्रो पाटीको नीति तथा सिद्धान्त बमोजिम अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ, मैले मेरो लक्ष्य, मान्यता सार्वजनिक गरिसकेको छु। यस सन्दर्भमा पार्टीको काम गरिरहनु भएका कार्यकर्ता, प्रतिनिधि शुभेच्छुकसँग मलाई सहगोग गर्न, मतदान गर्न आग्रह गरिरहनु भएको छ।
यो पार्टीको नेतृत्त्व गरेर राजनीतिलाई राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गर्नका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेको छु। म पार्टीका नेताकार्याकर्तालाई मेरो एजेन्डा बुझाउन लागिपरिरहेको छु। म सफल हुन्छु भन्ने लागेको छ।
केपी ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष हुनबाट रोक्न उम्मेदवारी त दिनु भयो। तर, एमालेकै नेताले यसलाई स्वभाविक ठानिरहेका छैनन्। फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् नि?
त्यो त अस्वभाविक ठानिरहनु भएका साथीहरूको व्यक्तिगत कुरा भयो। तर, मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक छ। मैले धेरे साथीहरुसँग छलफल गरेर उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ। पाटी अध्यक्ष ओलीसँग पनि मेरो छलफल भएको थियो। पार्टीका कुरा बाहिर नआएका भएर वा थाहा नपाएर उहाँहरूको त्यस्तो भनेको हुन सक्छ।
मैले स्थायी कमिटी बैठकमा पटकपटक अबको महाधिवेशनमा कसरी जानसक्छौँ?अब के हुन सक्छ?लगायतका विषयमा बारम्बार छलफलका लागि उठाएको थिएँ। तर, त्यसबारे अध्यक्षको ठोस जवाफ नपाएपछि पार्टीको नीतिबमोजिम, जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता अनुरुप म प्रतिस्पर्धामा गएको छु।
महाधिवेशनको मुखैमा आइसक्दा पनि सहमतिका लागि कुनै पहल नभएको र मेरो कुरा नसुनिएकाले उम्मेदवारी दिएको हुँ। मैले उम्मेदवारी दिएसँगै धेरै साथीहरुले धमाधम उम्मेदवारीको घोषणा गर्न थाल्नु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो।
जनताको बहुमत र पार्टीको नीतिप्रणाली बुझ्ने कुनै पनि साथीले मेरो यो उम्मेदवारीको घोषणा हठात् आएको भन्ने ठान्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। अर्को कुरा मलाई कसैले उम्मेदवारी नदिनुस् भन्दैमा म रोकिनेवाला छैन। फिर्ताका लागि आग्रह गर्ने साथीहरूको सहमतिका लागि त्यसो भन्नु भएको होला। तर, सहमति गर्ने भनेर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मार्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो उम्मेदवारी कायम रहन्छ।
सहमतिका लागि प्रयास भइरहेका बेला तपाईंले उम्मेदवारी दिन गरेको घोषणाले आफैँलाई क्षति गर्ला कि भन्ने त लागेको छैन नि?
त्यस्तो होइन, मैले धेरैसँग छलफल गरेरै यो निर्णय लिएको हुँ। सर्वसहमतिमा नेतृत्व छान्ने भनेर बाहिर आएको विषयमा पार्टीभित्र कुनै पनि छलफल भएको थिएन। बाहिर जुन कुरा आएका छन्, त्यो व्यक्तिहरुको आफ्नो धारणा हुन सक्छन्। मैले स्थायी कमिटीमा पटक-पटक यो हाम्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा त्यसले कुनै महत्त्व पाएन।
अन्य साथीहरुले पनि पार्टीको आधिकारिक फोरममा यो कुरा उठाएनन्। अहिले सर्वसहमतिको कुरा गर्नु बेकार हो। यस विषयमा मैले आधिकारिक रुपमा देखे-सुने-जानेको छैन। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा बसेर राष्ट्रियता, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रसम्बन्धी जुन कुरा उठाएको छु, त्यसका पक्षमा व्यापक समर्थन छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मेरो उम्मेदवारीले मलाई कुनै पनि तरिकाले क्षति पुर्‍याउँदैन। मैले विधिसम्मत ढंगले साथीहरूकै सल्लाहमा उम्मेदवारी दिन लागेकाले यसले राम्रै नतिजा दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भयो भन्ने निष्कर्षसहित तपाईंले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो?
हो, उहाँको विकल्प खोज्न जरुरी छ। अहिले देशको जुन स्थिति छ, यस्तो स्थितिमा स्पष्ट रुपमा यो पार्टीलाई राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने पार्टीका रुपमा उभ्याउने, देशको नेतृत्व गर्ने नेताको खाँचो छ। त्यसैले अहिलेका अध्यक्षले आफ्नो टाउकोमा रहेको भारी बिसाएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। म उहाँलाई आराम गर्न र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दछु।
ओलीलाई विश्राम लिन र आफूलाई अध्यक्षमा रुपमा स्वीकार्न तपाईंको आग्रह छ। तपाईलाई किन मत दिने भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कसरी 'कन्भिन्स' गर्नुहुन्छ?
मैले सार्वजनिक रुपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेकै दिन मेरा लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यसूची स्पष्ट पारेको छु। ११ पृष्ठमा मेरा कार्यसूची सार्वजनिक गरी यसबारेमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु। सबै कार्यकर्ता र नेतालाई भेटेर मैले प्रष्टाउन पाएको छैन। तर अहिलेको डिजिटल युगमा सबै साथीले हेर्नु भएको छ भन्ने विश्वास गरेको छु। मेरा एजेन्डा र उद्देश्य बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ।
मैले बार्गेनिङका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हैन। म जे भन्छु त्यही गर्छु। जे घोषणा गरेँ त्यसै अनुरूप अघि बढ्छु।
त्यसो त मैले विगतमा पार्टीका लागि गरेका काम, निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि साथीहरुले मूल्यांकन गरेका होलान्। विद्यार्थीदेखि बौद्धिक हुँदै अनेकौँ क्षेत्रमा ५० वर्षदेखि मैले यो पार्टीमा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण मलाई साथीले साथ दिन्छन् भन्ने लागेको छ। कार्यकर्ताले मलाई नचिनेको/नजानेको भन्ने लाग्दैन। उहाँहरूबाट सहयोग हुन्छ।
तपाईंले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नि?
विभिन्न विश्लेषक र विभिन्न साथीहरुले व्यक्तिगत तवरबाट गर्ने यस्ता टिप्पणीप्रति मलाई भन्नु केही छैन। तर, मैले उम्मेदवारी किन दिए? अब कसरी जान्छु भन्ने कुरा स्पष्टसँग भनिसकेकाले अन्यथा नठानी दिनुहुन सबै नेता कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गर्दछु। मैले बार्गेनिङका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हैन। म जे भन्छु त्यही गर्छु। जे घोषणा गरेँ त्यसै अनुरूप अघि बढ्छु।
त्यसो भए तपाईं कुनै पनि बाहनामा आफ्नो उम्मेदवारीबाट पछि हट्नु हुन्न?
राष्ट्रकै नेतृत्व गर्नका लागि मेरा दृष्टिकोण, एजेन्डा, देशका समस्या, समाधानका उपायसहित नेतृत्व गर्न सक्षम छु भनेर मैले आफ्ना कुरा कार्यकर्ता माझ राखिसकेपछि म ब्याक हुने कुरा हुँदैन। सबै कार्याकर्ता र नेता साथीहरुले कुरा बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। म फेरि पनि भन्छु, मैले कुनै आवेशमा आएर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको होइन। त्यसैले पछि हट्ने सम्भावना छैन।
पहिला-पहिला अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेले प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारीको घोषणा गर्थे। तपाईले त एक्लै घोषणा गर्नुभएको छ। अरुले नपत्याएर आफूले मात्रै उम्मेदवारीको घोषणा गर्नु भएको हो?
विगतमा हामीले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दने चलन थियो। त्यतिबेला हाम्रो पार्टीमा समूहगत उम्मेदवारी दिने पद्धति थियो। तर, यसपटक समूहगत उम्मेदवारी नदिने भनिएको छ। जो व्यक्ति जुन पदमा उठ्ने हो त्यो व्यक्ति आफैँ मात्र उठ्ने भन्ने निर्णय गरेकाले मैले एक्लै उमेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ। कसैले विश्वास नगरेर वा नपत्याएर होइन।
मैले साथीहरुसँगै सल्लाह गरेर उम्मेदवारी दिएकाले नपत्याउने भन्ने हुँदैन। यदि पार्टीले समूह बनाएर उम्मेदवारी दिन पाइने नियम बनाएको भए सजिलै म सबै पदमा साथीहरु खडा गर्न सक्थेँ। तर, यदि कसैले पार्टीको निर्णय बदलौँ, समूह बनाऔँ भन्यो भने म त्यति बेला सोच्न सक्छु।
तपाईको उम्मेदवारीलाई लिएर १० बुँदेका पक्षधर नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन। उनीहरुलाई कसरी 'कन्भिन्स' गर्नुहुन्छ?
धेरै साथीहरुको धारणा सहमति गर्न सक्छौ कि! पार्टी अध्यक्षबाट केही त्यस्तो हुन्छ कि! भन्ने थियो। त्यसैले साथीहरुले सहमति खोज्न भन्नुभएको थियो। मैले विगतमा पनि सहमति मान्दै आएको थिएँ र सहमति गराउँदै आएको पनि हुँ।
ओलीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।
हिजोका कयौँ कठिन परिस्थितिमा नेताहरुलाई मिलाएको पनि हुँ। त्यसकारण सहमतिको कुरामा मेरो कहिल्यै विमति रहँदैन। तर, महाधिवेशनको मुखैमा आइसक्दा पनि सहमतिका लागि कुनै पहल नभएको र मेरो कुरा नसुनिएकाले उम्मेदवारी दिएको हुँ। मैले उम्मेदवारी दिएसँगै धेरै साथीहरुले धमाधम उम्मेदवारीको घोषणा गर्न थाल्नु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो।
मेरो उम्मेदवारीलाई लिएर कोही पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। किनभने प्रतिस्पर्धामा जान, उम्मेदवारी दिन मैले छेकेको छैन। सबै साथीहरुले आफूले इच्छा गरेको पदमा उमेदवारी दिन सक्नुहुन्छ।
कुनै समय नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा नरहरि आर्चायले उम्मेदवारी दिनु भएको थियो। पछि निर्वाचित नेतृत्वले उहाँको कुरा सुनेन भन्ने गरिन्छ। तपाईंको पनि त्यस्तै त हुने हैन?
लोकतन्त्रमा कुन व्यक्ति कुन बेला उठ्छ, कुनबेला पराजित हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो। विभिन्न पार्टीमा नेता विभिन्न समयमा पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन्। कोही विजयी भएका छन्। कोही पराजित हुन्छन्। हाम्रै पार्टीका अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र म आठौं महाधिवेशनमा एउटै समूहमा थियौँ। दुवैले हार्‍यौँ। नवौँ महाधिवेशनमा फरक समूह बन्यो। दुवैले जित्यौँ। यस्तो जितहार भइरहन्छ। यो ठूलो कुरा होइन। मुख्य कुराचाहि के हो भने उम्मेदवारी केका लागि? त्यसले कति अर्थ राख्छ भन्ने हो।
अहिले मैले जुन कुरा उठाएको छु, हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जनताको हितसँग सम्बन्धित, जनअधिकारसँग सम्बधित, अहिलेको हाम्रो प्रणालीसँग सम्बन्धित, पार्टीसँग सम्बन्धित विविध कुराहरू मैले पार्टी पंक्ति र आमसमुदायमा बुझिने गरी स्थापित गर्न सकेँ भने त्यो धेरै महत्वपूर्ण हुनेछ। म त्यसका लागि लडेको हुँ। जितहार सामान्य कुरा हो।
ए, त्यसो भए यो पटक 'च्याँखे थाप्न' उम्मेदारी दिने, अर्को पटक जित्ने भन्ने हो तपाईको तयारी हो?
हैन, त्यस्तो पनि ठानेको छैन। यद्यपि राजनितिमा जुन पदमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ, जित्नु पर्छ भन्ने धारणा हुनु स्वभाविक हो। तर, अहिलेको महाधिवेशनमा मैले जे कुरा अघि सारेको छु ती यिनै हुन्। अब भविष्यमा हुने कुरामा त्यति बेलै सोचौँला।
अध्यक्ष ओलीले सहमति गरौं भनेर भन्नु भयो भने तपाईं सहमतिमा जाने संम्भावना छ कि छैन?
म राजनितिशाास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले राजनीतिलाई यर्थाथपरक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छु। अध्यक्षले के सोच्नुहुन्छ वा के गर्नुहुन्छ त्यो स्वयंले नभनेसम्म मैले यसोउसो भनेँ भने पनि काल्पनिक मात्रै हुन्छ। किनभने उहाँसँग मैले एक्लाएक्लै पनि कुरा गरिसकेँ, बैठकमा पनि कुरा राखिसकेँ। सबै कुरा हेरिसकेको हुनाले म अब यस्ता काल्पनिक कुरालाई महत्व दिन्नँ।
तपाईंले उमेदवारीको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी भएको छ कि छैन?
भएको छैन। उहाँले कसैमार्फत यस विषयमा कुरा गर्नु भएको पनि छैन।
ओलीलाई पराजित गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ तपाईलाई?
उहाँलाई पराजित गर्छु भन्ने नकारात्मक दृष्टिकोण ममा छैन। म विजयी हुन्छु भन्ने मेरो धारणा हो। मेरा धारणा, मेरा विचार, मेरा दृष्टिकोण सबै ठिक छन्। र, यसबीचमा पार्टीले जे जस्तो अवस्था व्यहोर्नुपर्‍यो ती कुरालाई ध्यानमा राखेर नयाँ किसिमले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसका लागि म योग्य छु भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।
कम्तीमा १० बुँदे सहमतिका पक्षधरलाई समेटेर उम्मेदारी दिनुभएको भए तपाईंको अलि शक्ति देखिन्थ्यो कि? त्यसो गर्न के ले बाधा गर्‍यो?
मैले अघि नै भनेँ, हाम्रो पार्टीको निर्णय बमोजिम समूहगत रुपमा उम्मेदवारी दिन नपाएका कारणले १० बुँदे पक्षधर नै छुट्टै छन् कि भने झै धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर, त्यस्तो होइन। १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका मात्रै होइन, अन्य साथीहरुसँग पनि निरन्तर कुरा भइरहेको छ।
एमाले अहिले ३ खेमामा विभाजित छ। १० बुँदे पक्षधर, पूर्वमाओवादी र ओलीको साथमा रहिरहेकाहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने छ कि? केही निश्चित साथीहरुको भरमा मात्रै हिड्नु भएको छ?
तपाईंले जे भन्नुभयो, त्यसैगरी जाऔँ भन्ने कुरा मैले पार्टीका विभिन्न बैठकमा राखेँ। १० बुँदे सहमति केन्द्रीय समितिबाट पारित पनि भयो। अन्तरपार्टी निर्देशन जारी पनि भयो। पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले जहिले पनि भनिरहेको छु। त्यस्तो हुन सकेन। सदस्यता विरण, नवीकरण र महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन पनि निष्पक्ष भएन। देशका विभिन्न भागहरुमा हाम्रो पार्टीको नीतिलाई नसुहाउने, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भए।
अहिले सर्वसहमतिको कुरा गर्नु बेकार हो। यस विषयमा मैले आधिकारिक रुपमा देखे-सुने-जानेको छैन।
उदारणका लागि कैलालीको लम्कीचुहामा उम्मेदवारी नै नदिई निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नगरी धनगढीबाट केही व्यक्ति गएर अत्यन्त स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिधिको नाम घोषणा गरिदिए। त्यसको विरुद्धमा पार्टीका १२ सयभन्दा बढी सदस्यहरुले पार्टीमा उजुरी दिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्था छ, पार्टीमा। यसकारणले मेरो मान्यता सबैलाई समेटर लैजानुपर्छ भन्ने नै हो। यस्ता धाँधली रोक्नुपर्छ भन्ने नै हो। पार्टीमा विभाजन भइरहेको बेला सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
पार्टीमा कोही व्यक्ति जसले कार्यकारीको उपयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरुले नै त्यो दिशामा स्पष्ट रुपमा काम नगरेपछि वा गर्ने लक्षण देखाउनु भएन। अर्को कुरा मेरो हातका कार्यकारी अधिकार छैन। मैले गर्ने कुरा रहेन। तर, अहिले पनि त्यो मान्यता राम्रो हो भन्ने ठान्छु। तर, अब त महाधिवेशन नै आइसकेको हुनाले प्रतिस्पर्धामा गएर आफ्ना नीति स्थापित गर्न उपयुक्त ठानेर अगाडि बढेको छु।
देशका अधिकांश ठाउँमा ओलीले जसरी निर्देशन दिनुभयो त्यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु छनोट भएका छन्। कैलालीको कुरा तपाईंले बारम्बार उठाउँदै आउनु भएको पनि छ। अब ती प्रतिनिधिका विषयमा के हुन्छ?
सबै ठाउँमा त्यस्तो भएको छैन। कतिपय ठाउँमा भएको छ। त्यो लोकतन्त्रको लागि उपयुक्त होइन। तर, जहाँबाट प्रतिनिधि आउनु भएपनि उहाँहरुले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। विगतमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले देशलाई हेर्ने, लोकतन्त्रलाई हेर्ने, पार्टीको एकता, भोलिको विकास हेर्ने नेतालाई छान्नु भएको छ। यसपटक पनि त्यही गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्ने तपाईं र घनश्याम भुसाललाई अध्यक्ष ओलीले खुब लखेट्नु भयो है? अहिले पनि माधव कुमार नेपालका सहयोगीका रुपमा मात्रै चित्रित गर्न खोज्नुहुन्छ!
अर्कामा मनमा के छ भनेर चर्चा गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ। अध्यक्ष स्वयंले केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गरेर, अपानि जारी गरेपछि पनि त्यस्तो अन्यथा दृष्टिकोण राख्ने हो भने त्यो जिम्मेवार नेतालाई सुहाउने काम होइन। तर पनि म उहाँको मनमा के छ त्यो विश्लेषण गरेर टिप्पणी गर्ने स्थितिमा छैन।
तपाईंको सुदुरपश्चिम इन्चार्ज, घनश्याम भुसालको उपमहासचिव पद जसरी खोसियो त्यो कुराले यसको पुष्टि गर्दैन र?
म नेकपा एमाले सुदुरपश्चिमको प्रदेशको संयोजक कमिटीको सदस्य थिएँ। एकीकरण भैइसकेपछि म इन्चार्ज थिएँ। त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हाम्रो सहभागिता जुन बेलादेखि भयो, छलफल गरेर अर्को निर्णय नगर्दासम्म जबर्जस्त गरिने काम अवैध भन्दै आएको छु। मेरो लागि मान्य छैन त्यो पार्टीको प्रणालीले पनि मान्दैन अब कोही व्यक्तिले अघोषित मै हुँ भन्ने त्यस्तो कुरा गर्‍यो भने त लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्ने कुरा केवल देखाउने भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यस्तो कुराले पार्टीलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।
प्रकाशित: November 25, 2021 | 17:32:46 काठमाडौं, बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
विद्या र ओलीले पाखा नपारेको भए म ४ वर्षअघि नै मुख्यमन्त्री बन्थेँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
पार्टी नेतृत्व सर्वसम्मत नभए त्यसको असर आम चुनावमा पनि पर्छ : एनपी साउद (अन्तर्वार्ता)
अहिले हामीले कांग्रेसका अघि जुन चुनौती देखिरहेका छौं, त्यो चुनौतिभित्र रहेर महाधिवेशन गर्ने हो भने आम निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने हो भने सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। सर्वसम्मत हुन सकेन भने त्यसले आम निर्वाचनमा पनि असर गर्न सक्छ।